तपाईंको समस्या, हाम्रो सहयोग प्रयास – ३ - Safal Stories
Home Reader's Blog तपाईंको समस्या, हाम्रो सहयोग प्रयास – ३
प्रश्न : म दुई सन्तानको आमा हुँ । मैले मेरो बच्चाबच्ची भइसकेपछि कलेज पढेकी हुँ । हाल म बि. एड तेस्रो बर्ष को पढाई गर्दैछु । साथै म स्थानीय तहको निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि हुँ । मेरो पढाईप्रती आजकल हौसला घट्दो छ । म सक्दिन भन्ने सोंच मात्र ममा हाबी हुन्छ । साथै मासमा बोल्दा म हड्बडाउछु अनि बोल्दा बोल्दा सोचाइको सबै कुरा बिर्सन्छु । म एउटा जिम्मेवार महिला भएकाले मान्छेहरुका माझमा बोल्नु मेरो पेशा, मेरो जिम्मेवारीसग जोडिएको विषय हो तर म बोल्नै सक्दिन। जब बोल्ने क्रममा बिग्रन्छ तब मलाई 3-4 दिनसम्म त्यही कुराले भित्र भित्रै खाइरहन्छ । कृपया केही उपाय भए बताइदिनुहोस् न।
निशा जी, हामीलाई विश्वास गरेर आफ्नो समस्या बताउनुभएकोमा धन्यवाद ! हामी कोही पनि गल्ती नै नगरेका र सर्वगुण सम्पन्न छैनौं । गल्ती भनेको सिक्नको लागि हो। तपाईं कत्ति पनि हतोत्साही नहुनुहोस् । मन्चमा जो फरर बोल्न सक्छन् , उनीहरुले पनि तपाईंले जसरि बोल्न सुरु गरेका हुन्। अझ, कोही त तपाईं जत्ति पनि बोल्न सक्दैनथे होला। सम्झनुहोस् , यो प्रयास नै तपाईंको सफलताको बाटो हो । तपाईंका खुट्टाले जब मन्चमा टेक्छन् , अरुले तपाईंको मूल्यांकन गर्दैछन् भन्ने नसम्झनुहोस् । मात्र, सम्झिनुहोस् की, तपाईं हिजो त्यो मंचमा उक्लिन सक्ने हुनुहुन्नथ्यो, आज तपाईंले प्रगति गर्नुभएको छ र यो मन्चमा उभिनुभएको छ। यो प्रगतिलाई निरन्तरता दिनुछ । रह्यो पढाइको कुरा, तपाईंका जिम्मेवारीले गर्दा पनि तपाईंमा सुस्तता आएको हुनसक्छ। त्यसैले पढ्नको लागि आफूलाई दबाब दिनुभन्दा, केही दिन विश्राम लिनुहोस् र विस्तारै पढाईको लागि प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंको हिम्मतलाई नमन ! तपाईं सक्नुहुन्छ। र, डरलाई कसरि कम गर्ने जान्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Previous४५ करोड डलरमा बिक्रि भयो लिओनार्दो दा भिन्चीको चित्रकला
Nextसंघर्षमा फुलेको एउटा प्रेरक जीवन